Ronaldo Oo ka Goolal Batay Messi 2011,Balse Messi Ayaa Shan Koob Soo Xaraystey. | Berberanews.com
Home CAYAARO Ronaldo Oo ka Goolal Batay Messi 2011,Balse Messi Ayaa Shan Koob Soo...
Ronaldo Oo ka Goolal Batay Messi 2011,Balse Messi Ayaa Shan Koob Soo Xaraystey.
(Berberanews Sports):- Marka ay iska horimanayaan kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ayaa muran la’aan waxa ay yihiin kuwo si xoog leh u loolama,balse ciyaartaa ayaa waxaa ka sii dhex jira tartan u dhexeeya labada laacib ee Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo.
Ciyaaryahanka reer Portuqal ayaa ka sara maray dhinaca gool dhalinta 12kii bilood ee la soo dhaafay ciyaaryahanka reer Arjantiin balse Messi ayaa waxaa uu ku guuleystey shan koob isagoo goolal ka badan kuwa Ronaldo uu saaxibadiis ka caawiyey inay dhaliyaan.
Labada laacib ma kala duwana qaab ciyaareedkooda balse laacibka reer Arjantiin ayaa waxa uu ciyaaraa ciyaaro la mid ah kuwii hore, qaab ciyaareedka wadada lagu ciyaaro halka ciyaaryahanka reer Portuqal uu ciyaaro qaab ciyaareed ka duwan oo orod iyo awoodba leh.
Messi iyo Ronaldo ayaa ku tartamaya iyaga iyo weliba Xavi Fifa Ballon d’Or bisha January waxaana la filayaa in laacibka reer Argentine uu guusha ku helo Zurich, Sanadka 2011 waxa ay u ahayd labada laaciba sanad wanaagsan, Cristiano ayaa dhaliyey 12kii bilood ee ugu dambeeyey 60 gool 60 kulan oo uu saftay.
Messi ayaa ku doodi kara in uu ka sareeyo Ronaldo maadaama uu u horseeday kooxda Barcelona inay ku guuleysato shan koob oo kala ah, La Liga, Champions League, iyo Spanish Supercopa, Uefa Super Cup iyo Club World Cup.
CRISTIANO RONALDO KOOX & DALBA SANADKA 2011
Ronaldo ayaa dhowaan jebiyey rikoor u yiil tirada goolasha ee tartanada muddo hal sano ah, laacibka hore ugu ciyaari jirey Manchester United ayaa goolal dhaliyey 43jeer tartanka La Liga sanadka 2011, waxana uu ka sare maray Messi oo 42 gool dhaliyey sanadkii 2010ka. 43kaas goolna waxa uu dhaliyey 34 kulan oo kaliya, 27 ayaa waxa ay ka mid ahaayeen xilli ciyaareedkii hore oo gaarayay illaa 40gool, sidoo kale Cristiano waxa uu dhaliyey 20 gool 16 kulan oo uu tababarayay kooxda Real Madrid Mourinho xilli ciyaareedkii 2010-11.
Ronaldo ayaa badanaa lagu eedeeyaa in aanuu goolal dhalin karin marka ay kooxaha waaweyn ay la ciyaareyso kooxdiisa. Si kasta ha ahaatee arrintan ayaa wax la iska weydiiyey kulankii ugu dambeeyey ee kooxda Barca 3-1 ku badisey ciyaartii Clasico. kulamada xulka qaranka uu u saftay sanadkan Ronaldo ayaa waxaa ay ahaayeen kuwo goolal wanaagsan uu dhaliyey, waxana uu shabaq cusjiyey toddobo gool sagaal kulan oo uu saftay. Waxaana kulamadaa ka mid ahaa mid ay isaga hor yimaadeen Messi dalka uu ka soo jeedo ee Argentina iyadoo ku dhamaatay ciyaartaas 2-1 oo ay ku badiyeen xulka qaranka Argentina, goolasha kale ayaa waxa uu ka dhaliyey wadamo dhinaca kubbada cagta aan ku wanaagsanayn sida Cyprus, Luxembourg, Denmark iyo Bosnia.
Hase yeeshee deeqsinimadiisa Ronaldo ee ah baasaska goolal ay ku dhasheen ayaa gaadhay sanadkan 17 halka uu Messi isagana uu baasay 28 baas oo goolal ku dhasheen. Madrid ayaa ku soo dhowaanaysa haatan Barca, taasna waxaa badankeed qeyb ku leh Ronaldo.
LIONEL MESSI KOOX & DALBA SANADKA 2011
Baasay Ganaax Koobab
Haatan,Messi ayaa ah laacibka muhiimka ah. Inkastoo kulamada uu dalkiisa u safto aanay ahayn kuwo uu soo bandhigo qaab ciyaareedka lagu yiqiin. Balse guud ahaan tirada waxa ay la mid tahay tan Ronaldo.
Messi baasas ka badan Ronaldo ayuu sanadkan sameeyey inkastoo hal gool oo qura uu ka hooseeyo Ronaldo 2011. Messi ayaa kulamada fudud iyo kuwa adagba ay isugu mid tahay dhinaca gool dhalinta marka la barbardhigo Cristiano. Sida Championka League Semi-final iyo Finalkaba goolal ayuu dhaliyey.
Balse Messi waxa uu ku hooseeyaa marka ay timaado ciyaaraha heer caalami ee qaramada. Taasna dalka Arjantine ayaa dhibaato ku tahay maadaama ay haystaan laacibka dunida ugu wanaagsan balse aan sidii la rabay ugu faa’ideyn karin. Balse xulka Arjantine waxa uu isku dayay in ay u ciyaaraan qaab ciyaareedka kooxda Barcelona si ay ugaga faa’ideystaan Messi. Sida qaabka Guardiola uu Messi dhinaca hore uga dheelsiiyo Messi gadaashiisana ay ka kaalmeynayaan Xavi iyo Andres Iniesta.
Waa arrin naxdinteeda leh in shaqsi u horseeday kooxdiisa 13 koob weliba tababraha hadda leyliya ee Guardiola, oo shan koob oo sanadka 2011ka ay ku jiraan. Balse Pep ayaa mar walba waxa uu sheegaa in aanay guulahaas gaadhi kari lahayn Messi la’aantiis.
Si kasta ha ahaatee, iyadoo Cristiano uu ka goolal batay Messi 2011ka. Haddana laacibka reer Arjantine ayaa ku dhamaystay sanadkan dhinaca sare maadaama uu koobab badan la qeybsaday kooxdiisa uuna goolal badan gacan ka geystey sidii ay ku dhasheen.
Balse iyadoo labada koox ay sanadkan cusub uu u bilaabmayo tartankooda, ayna labadooda laacib weli beretamayaan balse waxaa loo joogaa kan guuleysta abaalmarinta sanadka ee lagu wado in lagu dhowaaqo bisha june ee soo socota.
Previous articleKhasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay Gaadhi Waaraad ah oo galay Meherad ku taal Xaafadda Sabaxareed ee Caasimadda Hargeysa
Next articleTirada iyo Magacyada Garsoorayaal maanta la dhaariyey oo ka hawlgalaya Maxkamadaha gobollada Somaliland